Isahluko 56 | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Sengiqale ukuthatha isinyathelo sokujezisa labo abenza okubi, labo abaphethe amandla, kanye nalabo abashushisa amadodana kaNkulunkulu. Kusukela manje, noma ubani ophikisana Nami enhliziyweni yakhe, isandla sezinqumo Zami zokuphatha siyoba phezu kwakhe. Yazi lokhu! Lokhu kuyisiqalo sokwahlulela Kwami, futhi akukho sihe esizokhonjiswa kunoma ubani, futhi akekho ozoyekwa ngoba nginguNkulunkulu ongenaluzwelo owenza ukulunga, futhi kuzoba kuhle ukuba nonke nikubone lokhu.
Akusikho ukuthi ngifuna ukujezisa labo abenza okubi, kunalokho yimpindiselo abayithola ngenxa yobubi babo. Angisheshi ukujezisa noma ubani, akakho noma ubani engimphatha ngokungafanele—ngenza ukulunga kubo bonke. Ngiyawathanda amadodana Ami futhi ngizonda ababi abangidelelayo; lesi yisimiso okusekelwe kuso izenzo Zami. Nonke kufanele nibe nokuqonda izinqumo Zami zokuphatha. Uma kungenjalo, ngeke nibe nokuncane ukwesaba futhi niyoba abanganaki phambi Kwami, futhi ngeke nazi ukuthi yini engifuna ukuyiphelelisa, yini engifuna ukuyenza iphelele, yini engifuna ukuyizuza noma luhlobo luni lomuntu oludingwa umbuso Wami.
Izinqumo Zami zokuphatha yilezi:
1. Kungakhathaleki ukuthi ungubani, uma uphikisana Nami enhliziyweni yakho, uzokwahlulelwa.
2. Labo engibakhethile, bazoqondiswa masinyane kunoma yimiphi imicabango emibi.
3. Ngizobabeka eceleni labo abangakholwa Kimi. Ngizobenza bakhulume futhi benze ngokunganaki kuze kube sekugcineni lapho ngizobajezisa khona ngokuphelele futhi ngibalungise.
4. Abakholwa Kimi, ngizobanakekela futhi ngibavikele ngazo zonke izikhathi. Ngazo zonke izikhathi nizobanika ukuphila ngisebenzisa indlela yensindiso. Laba bantu bayoba nothando Lwami futhi ngokuqinisekile ngeke bawe noma baduke. Noma yibuphi ubuthakathaka abanabo buzoba obesikhashana, futhi ngokuqinisekile angeke ngibukhumbule.
5. Kulabo ababonakala kwangathi bayakholwa kodwa abangakholwa ngempela—okusho labo abakholwa kuNkulunkulu kodwa abangafuni uKristu, kodwa futhi abangamelani naye—lezi zinhlobo zabantu zidabukisa kakhulu, futhi ngezenzo Zami ngizobenza babone ngokucacile. Ngezenzo Zami, ngizosindisa lezi zinhlobo zabantu futhi ngibabuyise.
6. Amadodana kaNkulunkulu angamazibulo abe ngawokuqala ukwamukela igama Lami azobusiswa! Ngokuqinisekile ngizothululela izibusiso ezinhle kakhulu kini futhi niyoba nokujabula okuyokwanelisa izinhliziyo zenu; akekho oyolokotha ukuzivimba. Yonke into ilungiselelwe nina ngokugcwele, njengoba lokhu kuyisinqumo Sami sokuphatha.
Kuzo zonke izingxenye kufanele nikwazi ukubona lokho okwenziwa yisandla Sami nokuthi yimiphi imicabango enginayo enhliziyweni Yami—ingabe akuyona yonke eyenu? Ubani phakathi kwenu ongoWami? Ingabe uke wayihlola imicabango esenhliziyweni yakho noma amazwi owashoyo? Uke wawenza yini umzamo oqotho kulezi zinto? Udidekile ekhanda! Awuqotho! Awemukeli ukulawula koMoya oNgcwele! Bengilokhu ngikhuluma ngaphakathi kuwe ngokuphindaphindiwe, kodwa akukaze nhlobo kube khona ukusabela. Ungabe usaba yisiphukuphuku! Umsebenzi wakho ukubamba intando Yami futhi ngaphezu kwalokho kuyindlela okufanele ungene kuyo. Nididekile, aninakho ukuqonda, anikuboni ngokucacile lokho engifuna ukukufeza kini, noma lokho engifuna ukukuzuza kini! Ukuze ubambe intando Yami kufanele okokuqala uqale ngokusondela Kimi futhi uhlanganyele ngokwengeziwe Nami. Uhlale uthi awukwazi ukubamba intando Yami; usuvele ugcwele izinto zakho, khona-ke ngingasebenza kanjani kuwe? Awukukhuthalele ukuza ngaphambi Kwami, kodwa umane ulinde ngombono ophambene. Ngithi ufana nesibungu, kodwa uzizwa woniwe futhi awukwamukeli lokho. Ngalesi sikhathi kufanele usukume futhi ubambisane Nami! Ungabi nombono ophambene! Lokho kuyobuyisela impilo yakho emuva. Ukukhuthala kuletha imihlomulo kuwe, hhayi kwabanye—ingabe awukakuqapheli futhi awukakuqondi lokhu? Intando Yami yembulwa njalo kuwe—ingabe awukayiboni? Kungani ungakaze uyamukele? Futhi kungani ungakaze uyibambe intando Yami? Ingabe ukubamba intando Yami akukuletheli buhle?
Ngethemba ukuthi uzobonisa ukucabangela intando Yami kuzo zonke izinto ukuze ngibe nendlela engingahamba ngayo kanye nekhaya engingaphumula kulo kuwe. Ungabe usangivimba, kunonya olwedlulele! Awunakho ukuqonda amazwi Ami futhi uwuthathi sinyathelo ngawo. Bheka futhi ubone ukuthi sikhathi sini manje—ngeke kusaba nokulinda okwengeziwe! Uma ungalandeli eduze ezinyathelweni Zami khona-ke kuyobe sekwephuze kakhulu, ingasaphathwa eyokuba nanoma iyiphi indlela yokukuhlenga!
Okwedlule: Isahluko 55
Okulandelayo: Isahluko 57
Sekuseduze kakhulu ukuthi umsebenzi Wami uphele, neminyaka eminingi esiyichithe sindawonye isiyinkumbulo engabekezeleleki. Ngiphindaphinde...
Isikhathi siyedlula, ngokuphazima kweso nje selufikile olwanamuhla. Ngaphansi kokuqondiswa uMoya Wami, bonke abantu bahlala phakathi...
Imidumo eyisikhombisa iphuma esihlalweni sobukhosi, izamazamisa izulu nomhlaba, igumbuqela izulu nomhlaba, bese inkeneneza esibhakabhakeni!...